Motorola waxay bilaabeysaa inay ku tijaabiso Oreo Moto G4 Plus dhawaan | Androidsis
Eder Ferreño | | Motorola, Noocyada Android
Shalay waxaa la ogaaday inay ahayd Moto G5 iyo G5 Plus oo helay Android Oreo, wararkuna durba waxay imaanayaan taleefan cusub oo ka socda shirkadda. Xaaladdan oo kale waa Moto G4 Plus. Asal ahaan taleefankani kuma jirin liistada moodooyinka la doonayo in la helo cusboonaysiinta, laakiin mudaharaadyada ka imanaya dadka isticmaala ayaa shirkadda ku khasbay inay sidaas sameeyaan. Oo hadda, waxay ku bilaabi doonaan imtixaanno.
Inkastoo xilligan wax taariikhi ah lama siinin bilawga tijaabooyinkan oo leh Android 8.0 Oreo oo ku yaal Moto G4 Plus. Laakiin go'aanka shirkadda ee ah inay tixgeliso cusbooneysiinta taleefanka waa wax lala yaabo, in kasta oo dadka isticmaala midkood ay tahay war wanaagsan.
Tan iyo markii lagu dhawaaqay in taleefanka uu helayo Android Oreo, sanad ayaa ka soo wareegay. Marka sugitaanka isticmaaleyaasha leh 'Moto G4 Plus' muddo dheer bay ahayd, oo had iyo goorna gebi ahaanba ma ahan wax lagu farxo. Laakiin, bilowga tijaabooyinkan ugu yaraan waxay siinayaan calaamadda inay imaaneyso.
In kasta oo ay abuurto shaki badan isla waqtigaas. Sababtoo ah Ma garanayno goorta ay tijaabooyinkani bilaabmi doonaan, ama muddada ay sii socon doonaan isku mid. Caqli ahaan, haddii wax waliba si fiican u socdaan oo aysan jirin wax dhibaato ah, waxay qaadan doontaa waqti yar oo cusbooneysiinta ayaa loo diri karaa taleefanka sida ugu dhakhsaha badan.
In kasta oo ay u adeegto sidii a xaqiijin dheeraad ah milkiilayaasha Moto G4 Plus. Motorola waxay ku shaqeysaa cusbooneysiinta Android Oreo, kama aysan tagin isticmaaleyaasha la'aanteed. Laakiin waa inay sugaan xoogaa waqti ah inay helaan.
Waxaan dheg u noqon doonnaa warar dheeraad ah oo ka imanaya shirkadda. Xaqiiqdii dayrta waxaan baran doonaa wax badan oo ku saabsan horumarka imtixaanadan iyo suurtagal haddii ay jiraan wax beta ah iyo in kale. Waxay sidoo kale sheegi karaan goorta cusbooneysiinta Moto G4 Plus la filayo inay timaado.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Noocyada Android » Motorola waxay ku tijaabin doontaa Android Oreo Moto G4 Plus
Xitaa ma aysan gaarin g5s moto ka badan hal sano ka dib markii la bilaabay, hadda maxaa rajo u leh moto 4
Muxuu taleefankaaga Android u kululaanayaa?
Tabaha si aad uga hesho waxyaabo badan taleefankaaga NFC